नजिक न्युज | पेट किन बढ्छ? कसरी घटाउने?
रामदेवी महर्जन : पुट्ट बाहिर निस्केको पेट नै सबै रोगको घर हो। शरीरमा आउने अधिकांश समस्या पेटबाट सुरू हुन्छ। एउटा भनाइ छ– टाउको दुख्यो भने पेटमा चिसो लगाउनू। त्यसैले स्वस्थ रहन हाम्रो पेट हर हालतमा ठीक अवस्थामा हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ।
अहिले अधिकांश मानिसले भन्छन्, 'म माछा, मासु खाँदिनँ तर पनि मेरो पेट लागेको छ, किन होला?'
तर हामी सबै गल्ती आफू गर्ने, मन लागि खाने, शरीरलाई आवश्यकताभन्दा बढी खाने र बारम्बार त्यही गल्ती दोहोर्‍याउने र आफ्नो गल्तीबाट बढेको समस्या लिएर डाक्टरकहाँ गएर भन्छौं– डाक्टरसाब् ! म त्यस्तो धेरै केही पनि खाँदिनँ तर पनि पेट बढेको बढ्यै छ। मेरो यो पेट कसरी घटाउने? घटाइदिनु पर्यो, घटाउने औषधि दिनु पर्‍यो।
खाना खाँदा पेटले दिने संकेतः जब हामी खाना खान्छौं तब हाम्रो पेट भरिँदै जान्छ। भरिँदै गएपछि पेटले संकेत दिन थाल्छ। संकेतका रूपमा पहिलो डकार आउँछ। पहिलो डकारको संकेत हो- पेट भरियो, अब खाना कम गर।
डकार वेवास्ता गरी त्यही अनुपातमा खाना खाएमा दोस्रो डकारले संकेत दिन्छ। दोस्रो डकारको संकेत हो- अब पूर्ण रूपमा पेट भरियो, खाना बन्द गर।
उहिले हाम्रा बाजेबराजु एक खाना खाएपछि अर्को खाना जोहो गर्न शिकार गर्न हिँड्नु पर्थ्यो वा कुटो-कोदालो लिएर खेतमा काम गर्नु पर्थ्यो। यसले शारीरिक परिश्रम राम्रो भई खाना राम्ररी पच्थ्यो। शरीर बलियो र तगडा हुन्थ्यो। त्यस्तै जंगलका जनावर पनि एक खाना खाएर अर्को खानाका लागि घन्टौं शिकार खोज्नु पर्छ। यसले गर्दा जंगली जनावर दिनभर क्रियाशील र स्वस्थ हुन्छन्।
अहिले हाम्रो अवस्था- फ्रिजमा भरी खाना, खानापछि आरामै आराम, परिश्रमको निकै कमी।
वास्तवमा हाम्रो शरीर संसारको सबभन्दा ठूलो र भरपर्दो प्रयोगशाला हो। हामीले खाएको खाना मिले-नमिलेको देखिने पहिलो ठाउँ पनि यो शरीरमै हो। आहार, विहार र विचार ठीक छ-छैन भनेर प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि शरीर नै हो र खाएको ठीक वा बेठिक छुट्याउने मापदण्ड पनि शरीरै हो।
सिधा उत्तानो सुत्ने। दुवै खुट्टा सिधा राख्ने, दुवै हातलाई कम्मरको दायाँ बायाँ राख्ने। विस्तारै गहिरो सास तान्दै बायाँ खुट्टा ९० डिग्रीमा उठाउने, दायाँ खुट्टा सिधा भुइँमा राख्ने, मनमनै १० गन्ने र विस्तारै सास छाड्दै खुट्टा तल झार्ने। पालैपालो पाँच-पाँच पटक गर्ने।
आहार, विहारसँगै विचार पनि ठीक हुनुपर्छ। रिस, चिन्ता क्रोध, मोह, लोभ प्रतिस्पर्धा आदि भावले शरीरमा नराम्रो प्रभाव पार्छ जसले पाचनमा गडबडी भई कब्जियत, पेट बढ्ने र अन्य समस्या आउँछ। त्यसैले विचार उचित हुनुपर्छ। सेताेपाटीबाट
आइतबार ०४, साउन २०७७ ०९:०७ मा प्रकाशित
बाजुरा क्याम्पस सहीत सुपका ९ क्याम्पसलाई नमूनाका रुपमा स्तरोन्नति गरिने
कार्यकक्ष मै कुटपिटबाट स्वास्थ्य कर्मीको हात भाँचियो